Mogadishu Journal » Thorgan Hazard ayaa warbixin kabixiyay walaalkiis Eden hazard
Kahor seddexda kulan ee soo socota ee Belgium, Thorgan Hazard ayaa dhaleeceeyay jadwalka la soo buuxiyay wuxuuna siiyay warbixin ku saabsan walaalkiis.
Thorgan Hazard ayaan la dhacsaneyn jadwalka adag ee ciyaartooyda ay wajahayaan xilli ciyaareedka 2020-21 ka hor kulanka seddexaad ee madaxtinimada Belgium ee soo socda.
27 jirkaan garabka ka ciyaara ayaa ka mid ah kooxda Red Devils kulanka saaxiibtinimo ee ay la ciyaarayaan Switzerland iyo Nations League kulamada England iyo Denmark, oo dhammaantood dhacaya sagaalka maalmood ee soo socda.
Hazard ayaa ciyaaray kaliya 135 daqiiqo oo kubada cagta Bundesliga ah xilli ciyaareedkan sababo la xiriira muruqa bowdada oo dillaacay oo muddo bil ah garoomada ka maqnaan doona.
Laakiin jadwalka mashquulka badan ee ciyaartoyda caanka ah - gaar ahaan kuwa ay kooxahoodu u soo baxeen kubbadda cagta ee qaaradda - isaga lumin maayo isaga.
Xiriirka kubada cagta qaarada yurub ee loo yaqaan 'UEFA' ayaa helay qayb muhiim ah oo qaybtooda ka mid ah jadwalka mashquulsan ee soo kordhay, madaama ay dooratay in bilaha Oktoobar iyo Nofeembar fasaxyada loo badalo seddex kulan halkii ay ku dhegi lahaayeen labada kulan ee caadiga ah, talaabadaas oo ay sheegtay inay ku soo ceshatay taariikhihii dib loo dhigay. bishii Maarso cudurka faafa ee coronavirus awgeed.
“Wax walba waa badan yihiin, aniga kaliya maahan,” ayuu Hazard u sheegay suxufiyiinta Isniintii. Champions League, Bundesliga, Nations League… Ma doonayo inaan wax badan ka cawdo maxaa yeelay waa inaan qabsano shaqadeena, laakiin waa wax badan.
“Hagaag, halkaan Red Devils, qof walba wuxuu heli doonaa waqti uu ku ciyaaro. Tababaraha qaranku wuxuu soo xushay ciyaartoy badan. Inaad ku ciyaarto dhamaan sedexda kulan 90 daqiiqo wey adkaan laheyd.
Ciyaartoydu isma gubi doonaan. Tababarayaasheena sidoo kale waxay naga codsanayaan inaan taxaddarno, oo aan khatar badan gelin.
Waxaan sidoo kale la ciyaareynaa Dortmund seddexdii maalmoodba mar, waa arin adag - tababarayaasha qaranka sidoo kale waa inay qabtaan shaqadooda, hadii aanan dareemeynin fiicnaan, aan dhahno sidaas. ”
Belgium ayaa durbaba lumisay seddex ciyaaryahan oo dhaawac ah Isniinta, iyadoo Leandro Trossard, Alexis Saelemaekers iyo Hendrik van Crombrugge ay ka baxeen - kaliya kan dambe ayaa la bedelay, iyadoo loo yeeray goolhayaha Blackburn Rovers Thomas Kaminski.
Hazard walaalkiis Eden ayaa horeyba loo sheegay inuu dhawaan laga helay cudurka loo yaqaan 'coronavirus', taasoo la micno ah in ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee Real Madrid uu garoomada ka maqnaan doono wax ka badan hal sano isagoo aan u ciyaarin xulka Belguim waqtiga soo socda.
"Hal sano runtii waa waqti dheer," ayuu Thorgan Hazard ka yiri maqnaanshaha walaalkiis ka weyn. “Waxaan rajeynayaa inay tani si dhaqso leh u soo afjari doonto. Labada Belgium iyo Madridba waxay u xiisay Eden. Isagu waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican adduunka, mar walbana way fiicantahay in lagu daro kooxdaada.
Madrid ayaa guuldaro la kulantay dhamaadkii todobaadkii hore isaga la, aantii sidoo kale Red Devils ayaa sidoo kale laga badiyay England. Dhamaanteen waxaan u baahanahay Eden boqolkiiba 100. “Si kastaba ha noqotee, wuxuu dareemayaa wanaag.
Caafimaadkiisa wuu fiicanyahay mana muuqato wax calaamado ah [COVID-19]. Waxaa lagu karantiilay gurigiisa Madrid nasiib daro halkaan ma joogo. "Runtii waxay ku noqotay lama filaan isaga, mid aan fiicnayn. Dhaawacii wuu dhammaaday ka dibna coronavirus ayaa soo muuqday. Runtii waxaan rajeynayaa in waqtiga soo socda aysan wax dambe dhici doonin. "Runtii nasiib darro maahan. Kuwani waa labo toddobaad oo kale. Maxuu ka qaban karaa? Waxba."